Fanafihana tany Tsihombe Voatifitra teo amin’ny kibony sy ny fony ilay raim-pianakaviana
Tokony ho tamin` ny 6 ora hariva, ny alakamisy lasa teo, nisehoana fanafihan-jiolahy nahafatesana olona tany Tsihombe.
Raim-pianakaviana iray no namoy ny ainy noho ny tifitra nahavoa azy. Olona 3 hafa ihany koa no naratra mafy. Nditra an-keriny taminà tokantrano iray ireo dahalo 5 nitondra basy sy antsy nanao ny fanafihana. Avy hatrany dia nitifitra ka bala roa teo amin’ny kibony sy ny fony no nahafaty avy hatrany ilay raim-pianakaviana, ary tifitra hafa kosa no nandratra ireo olona 3 hafa. Araka ny loharanom-baovao dia famonoana ho faty an` ilay raim-pianakaviana ity mihitsy no tena tanjon’ireto jiolahy ireto. Tsy noraharahain’izy ireo tokoa mantsy ny vola, izay nambaran’ny tao an-trano fa nomena azy ireo, raha vantany vao tafiditra tao an-trano izy ireo. Taorian’ny fitifirana dia nirifatra ireo jiolahy ka nanao fanarahan-dia avy hatrany ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona saingy tsy nisy tratra izy 5 lahy nanafika. Raha ny fantatra dia manaraka fitsaboana ao amin` ny hopitaly ao Tsihombe ireo telolahy voatifitra.